शक्त्ति कपुरले भने “श्रद्धा र काठमाडौंका रोहनको बिहे हुन सक्दैन” « गोर्खाली खबर डटकम
बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा कपुरले नेपाली यु्वक रोहन श्रेष्ठसँग बिहे गर्ने हल्ला गाइगुइ सुनिदै आएको हो ।
तर पनि उनीहरुले आधिकारिक रुपमा यस्को घोषणा गरेका छैन्न । यसै सन्दर्भमा श्रद्धाका बुबा शक्त्ति कपुरले भने उनको विवाहको कुरा हल्ला मात्र भएको बताउँदै आएका छन् । उनले भने, “श्रद्धाको बिहे गर्ने उमेर भएको छैन । उनी अझै बालाखा नै छिन् । उनले जिबनमा धेरै गर्न र धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ ।”
बुधबार मात्र बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा र नेपाली व्याइफेन्ड रोहन श्रेष्ठ बाइकमा हिडिरहेको भिडियो भाइरल भएको थियो ।
बाघी ३ कि अभिनेत्री श्रद्धा कपुर व्याइफ्रेण्ड रोहनका साथ घुम्न निस्किएको तस्विर सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ ।
अहिले लकडाउन चलिरहेको छ । भारतमा पनि कोरोनाको असर सँगै लकडाउनलाई कायमै राखेको छ । यही बेलामा मंगलबार अर्थात हिजो श्रद्धा र उनको व्याइफेन्ड्र रोहन स्क्टरमा घुमेको फोटोहरु इन्टरनेटमा भाइरल भएको छ ।
भारतीय मिडियाहरुले प्रमुख स्थान दिएर यस्लाई प्रकाशन गरिरहेका छन् ।
महाकाली सन्धिको बेलामा महाकालीको मुहान पत्ता किन लगाइएन ?’ ‘यो राष्ट्रघाती को हो ? यसको पर्दाफास गर्नुपर्छ ।’ राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादी पहिचान गरी राष्ट्रघातीलाई टुँडिखेलमा झुण्ड्याउनुपर्छ !!
बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा कपुरले नेपाली यु्वकसँग बिहे गर्ने हल्ला गाइगुइ सुनिदै आएको हो ।
तर पनि उनीहरुले आधिकारिक रुपमा यस्को घोषणा गरेका छैन्न । अहिले उनीहरु सँगै देखिनुले फेरि यस्ले एकाएक चर्चा पाएको छ ।
श्रद्धाका बुबा शक्त्ति कपुरले भने उनको विवाहको कुरा हल्ला मात्र भएको बताउँदै आएका छन् ।
रोहन बलिउडका चर्चित सेलिब्रिटी फोटोग्राफर राकेश श्रेष्ठका छोरा हुन् । बलिउड बबलका अनुसार श्रद्धा लामो समयदेखि रोहनसँग डेट गरिरहेकी छिन् ।
दुबैले एक अर्कालाई लामो समयदेखि चिन्दछन् ।
३४ वर्षे रोहनको मूलघर काठमाडौं हो । उनका बुवा राकेश श्रेष्ठ काठमाडौंमा जन्मिएका हुन् ।
फोटोग्राफीमा रुची राख्ने राकेश मुम्बई गएर सेलिब्रिटीको फोटो खिच्न थाले र उतै चर्चित भए ।
रोहनको जन्म भारतको मुम्बईमा भएको हो । उनले न्यूयोर्क फिल्म एकेडेमीमा अध्ययन गरेका थिए ।
उनले बुवाको पेशालाई पछ्याउँदै आफू पनि यही क्षेत्रमा स्थापित भए ।
रोहनले फिल्मफेयर, इन्डिया जिक्यू, फेमिना, कस्मोपोलिटन, पिपल आदिका कभर फोटोसुट गरिसकेका छन् ।
उनले बलिउडका शीर्ष कलाकारको फोटोसुट पनि गरिसकेका छन् ।